सामाजिक सञ्जालमा आरोप : रविन्द्र मिश्र र रवि लामिछाने अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएका नेपाली एजेण्ट हुन् ! – ताजा समाचार
सामाजिक सञ्जालमा आरोप : रविन्द्र मिश्र र रवि लामिछाने अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएका नेपाली एजेण्ट हुन् !
काठमाडौं। नेपालमा अमेरिकी सहायता निकम मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । देशैभर यस विषयमा बहस भइरहेका वेलामा साझा पार्टीका अध्यक्ष तथा बीबीसीका पूर्व पत्रकार रवीन्द्र मिश्र र लामो समय अमेरिका बसेर नेपालमा आएका टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने एमसीसीको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् ।
साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले एक कार्यक्रममा एमसिसी परियोजनालाई संसद्बाट कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन् । झापाको धुलाबारीमा एक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मिश्रले एमसिसी परियोजना मुलुकको हितमा रहेको भन्दै यसलाई गुमाउन नहुने धारणा राखेका हुन् ।
सर्वसाधारणको तहबाट व्यापक विरोध भईरहेका बेला मिश्रले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुनुपर्ने अभिव्यक्ती दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्को आलोचना भईरहेको छ । सामाजिक संजालमा मिश्रले नुनको सोझो गरेको भन्दै विरोध भएको हो ।
मिश्रलाई अमेरिकाले नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन अमेरिकी गुप्तचर सस्था सीआईएले एजेण्टको रुपमा पठाएको र एमसीसी काण्डले त्यसको पर्दाफास गरेको सामाजिक संजाल प्रयोग कर्ताहरुले तर्क गर्न थालेका छन् ।
अर्का टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले पनि एमसीसीको बचाउ गरेका छन् । उनले पनि नेपालमा यती ठुलो लगानी आउँदा सबैले स्वागत गर्नपर्ने भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । आफ्नो कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले एमसीसीका केही गलत प्रावधानलाई सच्याएर पास गर्नुपर्ने धारण राखेका हुन् ।
उनी पनि लामो समय अमेरिका बसेर आएकाले उनीमाथि पनि आशंका हुन थालेको कुराहरु सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् ।
एमसीसीको बारेमा राम्रो नराम्रो बहस चलिरहेकै बेला चुरो कुरा के हो हेर्नुहोस तलको भिडियोबाट